Papawaddy : Myanmar Beauty Website Papawaddy :: Myanmar Beauty WebsiteBeautyFashionCelebrityHealthWeddingLifestyleReviewStoreDirectory - Papawaddy :: Myanmar Beauty Website- Beauty- Fashion- Celebrity- Health- Wedding- Lifestyle- Review- Store- Directory Home Celebrity မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်ထဲက ရွှေမှုန်ရတီနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Friday, 17 May 2013 14:58	font size
လက်တလော မြန်မာဗီဒီယိုဈေးကွက်မှာ ပေါက်နေတဲ့ကားကတော့ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ဝေဖန်မှု အများဆုံးရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်ဇာတ်ကားကို လူများသုံးတဲ့ဆိုရှယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့် မျှဝေရာက ပရိသတ်တွေသိကြပြီး ဝေဖန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သည်မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ချစ်ကြိုက်ခန်းတွေက တကယ်လက်တွေ့ နမ်းလာတဲ့ပုံစံတွေပါဝင်လာသလို အိပ်ရာပေါ်ကအခန်းတွေကလည်း ပီပီပြင်ပြင်ရိုက်လာတဲ့အတွက် ပရိသတ်တချို့က ဝေဖန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သည်ကားထဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါတယ်။ အချို့ကိုကောက်နုတ်ဖော်ပြပါတယ်။
မော်ဒန်။ ။ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ် ဇာတ်ကားကို ဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့အပ်ါမှာ ဘယ်လိုခံစားမိလဲ။
ရွှေမှုန်ရတီ ။ ။ ညီမက ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုရိုက်ပြီဆိုရင် သဏ္ဌာန်လုပ်သရုပ်တူအောင်လုပ်တယ်။ သည်ကားကို ညီမကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်တယ်။ ဝေဖန်တဲ့သူတွေကလည်း ဝေဖန်ကြတယ်။ အားပေးတဲ့သူတွေလည်း အားပေးကြတယ်။ အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်ကြတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ သူများကိုမထိခိုက် မနစ်နာစေဖို့ကတော့ အရေးကြီးတယ်လေ။
မော်ဒန် ။ ။ သည်ဇာတ်ကားမှာ ညီမရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုရင် ခက်ခဲမှုတွေရှိတော့ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ။
ရွှေမှုန်ရတီ။ ။ ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ပြီဆိုရင် အဲသည်ကားရဲ့ စိတ်ကိုညီမသွင်းပါတယ်။ သဏ္ဌာန်လုပ်သရုပ်တူအောင်၊ အဆင်ပြေအောင်၊ ဇာတ်ကားရဲ့ ကာရိုက်တာဝင်အောင် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ဘာကြောင့် သည်ဇာတ်ကားကို ပရိသတ်ဝေဖန်ခံရတယ်လို့ ထင်မိလဲ။
ရွှေမှုန်ရတီ။ ။ ရိုက်ထားတဲ့ ကာရိုက်တာတစ်ခုက သည်ကားမှာ သည်ဖရိန်ပါမှ ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် သည်ဟာကို ကြိုးစားပြီးတော့ အကုန်လုံးက လုပ်ကြတာပေါ့။ ရွှေမှုန်တို့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံစံတွေက အရင်တုန်းက သူများတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံစံတွေလိုပါပဲ။ ဘာမှမခြားနားပါဘူး။ သည်ကားမှာပါဝင်တဲ့အခန်းတချို့ကလည်း အရင်ကရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ပုံစံတွေပါပဲ။ အဲဒါကိုမှ ဘာလို့ရွှေမှုန်တို့ကားမှ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူး။
မော်ဒန်။ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဝေဖန်မှု ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိလာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော ဘယ်လိုကာကွယ်သွားဖို့ရှိလဲ။
ရွှေမှုန်ရတီ။ ။ကာကွယ်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်က ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ပြောတဲ့စကားတွေကို တစ်ရက်နှစ်ရက်ထက် ပိုပြီးတော့ ပရိသတ်နားထဲမရောက်ဘူး။ သုံးလေးရက်နေရင် အဲသည်လူက အလိုလိုမြောင်းထဲရောက်သွားမှာပါ။
မော်ဒန် ။ ။ ကိုယ်က အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ခုလိုဝေဖန်မှုက ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကို ယိမ်းယိုင်သွားနိုင်လား။
ရွှေမှုန်ရတီ။ ။ ညီမက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်မယ်။ ကိုယ့်ကြိုးစားရမယ့်ဟာကို ကိုယ်ကြိုးစားမယ်။ ရှေ့လမ်းကိုပဲ တည့်တည့်လျှောက်မှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အောင်မြင်ပြီလို့ ဘယ်တော့မှမသတ်မှတ်ဘူး။ အောင်မြင်ပြီလို့သတ်မှတ်တဲ့နေ့က ကျရှုံးတဲ့ နေ့ပဲ။ အဲသည်တော့ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကို တည့်တည့်ပဲသွားမယ်။ဘေးချော်ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူးလည်း မရှိပါဘူး။
မော်ဒန်။ ။ ပရိသတ်အထင်လွဲစေနိုင်မယ့်၊ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနိုင်မယ့်ဇာတ်ကားတွေ ဘယ်လိုရှောင်ရိုက်သွားမလဲ။
ရွှေမှုန်ရတီ။ ။ အခုရိုက်ထားတဲ့ ကားတော်တော်များများမှာ အဲသည်လိုမျိုးတွေ မရှိပါဘူး။ အခုထွက်ထားတဲ့ကားကလည်း အဲသည်လောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရွှေမှုန်တို့သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးမြင်စေသလိုဖြစ်သွားရင် ရွှေမှုန်က အားလုံးကိုယ်စား တောင်းပန်ပါတယ်။
Ref: The modern
« ရဲလေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း	သားလေးကို ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်အောင် ပျိုးထောင်နေတဲ့ အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗို »
Beauty & Spa (37)Massage & Spas (1)Hair Salons & Barbers (17)Reflexology (2)
ပပ၀တီ မှ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်မ တို့ ဒီနေရာလေးမှ အလှအပ နဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို တစ်စုတစ်စည်း တည်း တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Copyright © 2013 Papawaddy : Myanmar Beauty Website. All rights reserved.
Developed by Pinlon Talent